09.05.2020 Category: ไม่มีหมวดหมู่
Weligaa miyaad dooneysay inaad bilowdo baloog kuu gaar อา? Ama, miyaad horay u leedahay baloog aadan hubin สีดา aad ugu gudubtid heerka ku xiga?
Haddii jawaabtaadu tahay“ haa” markaa boggan วา meesha la rabo ใน la joogo.
0.0.2 Maxaa loo hayaa tusahan บล็อก? Waxoogaa yar oo naftayda ku saabsan ah
1.1 1. Xullo martigaliye เว็บโดเมน wanaagsan iyo magac
1.1.1 โดเมน Magacyada – Xagee la iska diiwaangeliyaa?
1.1.3 บล็อก Taliyay Martigelinta ee Newbies
1.3 3. สร้าง WordPress WordPress ของคุณเองบนอินเทอร์เน็ต
1.4 4. Raadi Boggaaga Maamulka และ WordPress iyo Soo gal
2.1 สีดาลู doorto โพรงบล็อก saxda อา?
2.1.2 2. ขี้ผึ้ง aad jeceshahay
3 Cutubka 5. บล็อก Kobcinta Akhriskaaga
3.4 4. Faallooyinka บล็อก
4.3 Sawirro Sawirro iyo Sawiro bilaash อา
5 บล็อก Su’aalaha Inta Badan La Isweydiiyo
Maxaa loo hayaa tusahan บล็อก? Waxoogaa yar oo naftayda ku saabsan ah
Waxaan aasaasay Xogta Dahsoon ee Shabakadda Diiwaangelinta Websaydhada xaha ioohoo aoaho iooo aoa-ayaho iooho iooho iooho ao ayaho iohoho ao ayaho ao ayaso ihaha ako aahaso ihaha iana ihaha ihaha ixa-a-ka-a-a-ka-a-a-a-a-ka-a-a-u-a-u-a-a-a-asi Tan iyo markaas, WHSR waxay kortay inay noqoto mid ka กลาง ah shabakadaha ugu horogya ega horraya ee kagae taye ka ka rahe rahe – ea kagaa gahamham mart mart mart Net Net Net, Neta k sum web web web wax wax wax sum sum sum sum sum sum sum sum Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net buugga iyo goobta, sameynta waa marin loo adeegsado qofkasta oo ka bilaabaya dariiqa บล็อก -a ee iskiis loo martigaliyay.
Tilmaamahan macno-darada ah, waxaan ku siin doonaa qaar ka กลาง ah dhaqso aya aya ka-ka sarayya ka sarreeya ka sarreeya dhammaan ea ka ka sarreeya ka sarreeya.
bogga qoraaga bogga ของฉัน Problogger.net – Waxaan si joogto ah ugu daabacay tiro badan oo hagitaan ah oo ku saabsan bogga hagaha บล็อกเกอร์ inta u dhexeysa 2015 – 2018.
Way fududahay oo rakhiis tahay ใน biloowga laga bilaabo 2020.
ซอฟต์แวร์สำหรับบล็อกของคุณ, WordPress.org, และอื่น ๆ สร้าง WordPress กับ ee xirfadda ที่ iyo waxyaabaha la soo saaray waa bilaash. Oo waxaa jira malaayiin macalinno ah oo bilaash อาศรีเออาย kuu bilaabaan (oo ay ku jiraan kan) Qiimaha kaliya ee ku lug leh bilaabida balooggu waa lacagta aad kubixiso martigeliyaha shabakadda iyo magaca โดเมน.
Hubaashii, วิธี kugu dhicikartaa marxaladda dambe; laakiin guud ahaan marka la hadlayo, baloog garaynta ayaa awood u leh qof kasta oo leh kombiyuutar ku xiran khadka internetka. Xaqiiqdii waxaad dhab ahaantii abuuri kartaa บล็อก oo aad ku socon kartaa 20ka daqiiqo ee soo socda Talaabooyinka lagu xusay talaabooyinka soosocda ayaa อาสีดา saxda อาอีดา ae aan ku abuuro bogaggeyga bilowga.
Xullo martigaliye เว็บ wanaagsan iyo magac โดเมน
ที่ดีที่สุดสำหรับ WordPress WordPress มาร์ติเกลฮายาคัส cusub (ayey u fududahay และ adeegsanaya qalabka iskiis-u-rakiye).
คลิกที่นี่เพื่อรับ WordPress จากเราไปที่หน้าแรกของคุณ.
Codbaa fudud? Wah khiyaamaysaa!
Waxaan ku marayaa inaad soo marto tallaabooyinka hoose. Xor baad u tahay hadaad hore u taqaanid สีดา loo hagaajiyo bartaada.
1. Xullo martigaliye เว็บโดเมน wanaagsan iyo magac
คุณอยู่ที่บล็อกและบล็อก iskood u abaabulan, waxaad marka hore u baahan doontaa magac โดเมน iyo koontada martigelinta websaydhka.
Qaybtaadu waa magaca baloogyadaaga Ma ahan wax jir ahaaneed oo aad taaban karto ama arki karto; laakiin kaliya taxane ah oo jilayaasha ah oo boggaaga u siinaya aqoonsi – sida cinwaanka buug ama meel Qaybtaadu waxay ‘u sheegtaa’ booqdayaashaada nooca blog ay booqanayaan.
Martigelinta websaydhka, dhinaca คะน้า, waa meesha aad ku kaydiso waxyaabaha ku จิรา balooggaaga – ereyada, บล็อก mawduucyada, Sawirrada, fiidiyaha, iyo wixii la mid ah.
โดเมน Magacyada – Xagee la iska diiwaangeliyaa?
Waad dooran kartaa oo aad iska diiwaangelin kartaa magacyadaada domainka adigoo adeegsanaya diiwaan-haye. GoDaddy, NameCheap, dulsaar, Iyo Domain.com waa qaar ka กลาง ah diiwaan-galiyaasha ugu caansan suuqa.
Ogsoonow inay mhihiim tahay ใน la kala saaro diiwaangelinta domain-ka iyo websaydhkaaga Kaliya sababtoo ah martigaliyahaaga webku wuxuu bixiyaa โดเมน bilaash ah micnaheedu maaha inaad u ogolaato shirkadda martigelinta inay maamusho diiwaangelintaada โดเมน Shakhsi ahaan, waxaan u isticmaalaa NameCheap si aan u maareeyo diiwaan gelintayda; laakiin diiwaan-gelinnada kale ee sumcad-celinta sumcad-celiyaha คะน้า kast kastaa waa inay fiicnaadaan Marka aan sidaa yeelo, waxaan awoodaa ใน aan wax ka badelo degelkeyga DNS mar alla markii aan rabo oo aan iska ilaaliyo ใน aan ku xirnaado hal webside เว็บกาอา Waxaan si xoogan kuugula talinayaa inaad sameyso isku mid si aad u ilaaliso นาฟตา.
Marti gelinta la wadaago – ใน kasta oo agabyada martigalinta ay ka yar yihiin kuwa kale (VPS, daruur, iwm), waxaad u baahan doontaa miisaaniyad ka yar (อินทา Badan) <$ 5 / เดือน isqorista) iyo aqoonta farsamada si aad u bilowdo Markaad dooraneyso websayd deg deg ah bartaada, kuwanu waa shanta arrimood ee
halaynta – Balooggaagu wuxuu u baahan yahay inuu ahaado กลาง deggan oo laga heli karo qadka 24 × 7.
ความเร็ว – Waxaad ubaahantahay marti qaade si dhakhso badan u xamaasha maxaa yeelay xawaaraha wuxuu saameeyaa khibradaha isticmaalaha iyo qiimeynta raadinta.
Qiimo u goynta – Marti gelinta <$ 5 / เดือน waa bilow fiican, uma baahnid adeeg khidmad sare heerkaan ah.
Qolka lagu beero – Waxaad ubaahantahay marti galinta casriyeynta (astaamo dheeri ah, เซิร์ฟเวอร์ awood dheeraad ah, iwm) marka balooggaagu sii kordhayo.
Taageerada – Internetku waligiis waa isbedelayaa, มี iyo jeer วิธี wanaagsan tahay ใน qof kuu taageero dhinaca farsamada.
บล็อก Taliyay Martigelinta ee Newbies
Marti gal laba baloog oo kujira InMotion Hosting oo ah $ 3.99 / เดือน.
Marti-geliyaha ayaa ah mid ka mid ah martigaliyayaasha webka ugu jaban ee hareeraha ah, gaar ahaan inta lagu gudajiro mudada diiwaangelinta ใน kasta oo ay tahay shirkad martigelinaysa miisaaniyad, Hostinger wuxuu soo bandhigayaa tiro badan oo อ่า qaababka martigelinta qaddarka leh ee ku habboon dadka ขี้ผึ้ง qora.
SiteGround wuxuu ku dallacayaa $ 3.95 / เดือน markay hal hal baloog galaan.
Talo Pro: Sababtoo ah martigaliyaha webka ayaa caan ah, macnaheedu maahan inay ugu fiican tahay balooggaaga Fiiri waxqabadka martigelinta oo si taxaddar leh dib u eeg intaadan go’aan gaarin.
Marka kig xigta, waxaad u baahan doontaa inaad cusboonaysiiso diiwaanka DNS ee diiwaangeliyaha เว็บไซต์ในพื้นที่มหากาพย์ (meesha aad ka diiwaangashan tahay qaybtaada tallaabada # 1).
DNS wuxuu u taagan yahay Nidaamka Magaca Magaca waxaana loo isticmaalaa inuu ku jiheeyo isticmaale kasta oo kusoo gala cinwaanka IP-ga ee server-ka Marka, marka isticmaale galo“ WebHostingSecretRevealed.net” ใน DNS DNS waxayo qaadan doonaan cinwaanka IP ee martigeliyaha websaydhka oo u adeegi doona barta isticmaaleyahey.
Waa kuwan tilmaamaha-tallaabada-tallaabada ee cusboonaysiinta boggaaga บล็อก -ka ที่ GoDaddy หรือ Namecheap.
3. สร้าง WordPress WordPress ของคุณเองบนอินเทอร์เน็ต
ถ้าคุณต้องการบล็อกคุณสามารถใช้เวิร์ดเพรสบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบล็อกนี้ได้จากเว็บไซต์นี้ Tan waxaa lagu samayn karaa gacanta, ama si otomaatig และ iyadoo la adeegsanaayo hal-guji แอพแอพ Labada qaabba si fudud ayey u fududahay oo si fudud ayaa loo samayn karaa.
Soo qaado oo iska fur furaha WordPress ไม่เสียค่าใช้จ่าย.
ฐานข้อมูลของคุณสำหรับ WordPress และเซิร์ฟเวอร์ที่ดีที่สุด, iyo sidoo คะน้า adeegsade MySQL oo leh ธัมมมมานะฮ์ helitaanka iyo ขี้ผึ้ง ka beddelidda.
ขอขอบคุณ wp-config-sample.php faylka wp-config.php.
ขน wp-config.php qoraalka qoraalka (Farriin) kuna buuxi faahfaahinta xogtaada.
วิธีการติดตั้ง WordPress และไปที่เซิร์ฟเวอร์และเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์.
ที่นี่คุณสามารถเล่น WordPress โดยอัตโนมัติจาก wp-admin / install.php ee shabakada internetka Haddii aad WordPress และเป็นผู้ดูแลระบบของ xididka, และในตอนนี้คุณจะได้รับ booqataa: http://example.com/wp-admin/install.php; haddii aad WordPress และ ka rakibtay astaanta gaarka และ ee loo yaqaan บล็อก, tusaale ahaan, waa inaad sooo booqataa: http://example.com/blog/wp-admin/install.php
บล็อกเกอร์ Inta Badan เป็นบล็อก WordPress ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ.
Iyada oo taageero laga helayo adeegyo rakiba hal-sida Softaculous iyo Mojo ตลาดสถานที่ (waxay kuxirantahay websaydhka aad isticmaaleyso), habka rakibaadda waa กลาง sosos ah horay u socda waxaana lagu samayo kaira kaira.
Tixraac ahaan, sawirada soo socdaa waxay muujinayaan halka aad ka heli karto muuqaalka rakibida แดชบอร์ด ee boggaaga คุณอยู่ที่ WordPress, kaliya dhagsii sumadda wareegga oac raac tilmaamaha-caddeynta dummy – Nidaamkaaga WordPress ไม่ต้องกังวลกับ shaqeynaya ไขกระดูก 5 ปีที่แล้ว.
ดาวน์โหลด: Waxaad kak rakiban kartaa WordPress martigeliyahaaga web-ka dhoor dhagood oo keliya adoo adeegsanaya ‘Hostinger Auto Installer’ (booqo Martiyaha halkan).
Waxyaabaha way u kala duwanaan karaan martigeliyaasha websaydhada kala duwan laakiin howsha asal ahaan waa isku mid Ha welwelin haddii aadan adeegsan mid ka mid ah marti-geliyayaasheyda aan halkan ku muujinayo.
Shakhsi ahaan waxaan และ maleynayaa WordPress เข้าสู่ระบบเพื่อดูความคิดเห็นอื่น ee wax lagu qoro ee loo yaqaan ‘newbies’ Iyada oo ku saleysan tirakoobyada laga dhisay Dhismaha, ในปากีสถาน 95% ee boggaga internetka ee Mareykanka waxaa lagu dhisay iyadoo la adeegsanayo WordPress. Caalamka, waxaa kh dhawaadba 27 การสร้างบล็อกของบล็อก ayaa ku shaqeeya WordPress.
4. Raadi Boggaaga Maamulka และ WordPress iyo Soo gal
เพิ่มลงใน WordPress ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับ URL ที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น WordPress WordPress การตั้งค่า badankood, URLku wuxuu noqon doonaa wax sidan oo kale ah (waxay kuxiran tahay galka aad ku rakibtay WordPress):
แท็ก URLkan oo gal magacaaga hore iyo ereygaaga furaha ah; oo halkaas ka socota, waxaad hadda joogi doontaa qaybta dambe ee (แดชบอร์ด) boggaaga WordPress – kani waa qayb ka ah aho maamulaha และ aiga marin และ heli kartaan.
Abuuritaanka qusal cusub oo lagu sameeyo WordPress-ka cusub ee Gutenberg.
ไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไร WordPress WordPress xaadirka wax lagu qorayaa waa nooca 5.3.2 – ที่ดีที่สุดสำหรับคุณที่จะทำการโหลด WordPress ของคุณไปที่ WordPress WordPress. Gutenberg waxay keentaa dabacsanaan badan oo ka timaadda masraxa WordPress-ka. Tani waxay si gaar ah faa’iido u leedahay bilowga maadaama waxyaabo badan sida dejinta midabada asalka iyo inbadan oo aan hada u baahneyn nambar. Nidaamka xannibaadda wuxuu ka caawiyaa maareynta qaabka maqaalka sidoo คะน้า.
ถ้าคุณชอบสิ่งใด oo u daabacato boostada cusub, ถ้าคุณชอบ raac dhinaca bidixda bidixda, riix ‘Posts’> ‘เพิ่มใหม่’ oo waxaa laguu tilmaami doonaa shaashadda qoraalka Guji ‘Horudhac’ si aad u aragto sida waxyaabaha u egyihiin dhinaca hore (wixii ay akhristayaashu arki doonaan), riix ‘daabac’ marku dhammeysto.
Tani waa meesha aad ka heli karto dhammaan mawduucyada WordPress ee bilaashka ah. Mowduucyada ku taxan tusahan waxay raacayaan heerar และ adag oo ay bixiyaan soosaarayaasha WordPress, saraa daraadeed, fikradeyda, tani waa meesha ugu wanaagsan ee lagu helo bilaash, naqshadaha.
Hab คะน้า oo lagu helo mawduucyo tayo sare leh ayaa ah inay ku biiraan Naadiyada Naadiga WordPress.
Haddii tani ay tahay markii ugu horreysay ea aad maqashid naadiyada Theme, waa sidan sida ay u shaqeyo shaqeyso: Waxaad bixineysaa lacag go’an oo aad ku biireyso naaddiga Mawduucyada lagu bixiyo Naadiga ‘ธีมคลับ’ sida caadiga ah waa kuwo xirfad ahaan loo habeeyay oo si joogto ah loo cusbooneysiisto.
กดปุ่ม, กด, กดปุ่ม, กดปุ่ม, กด, WordPress, กด, และกดปุ่ม.
Waxaa jira wax badan oo kale oo badan oo คะน้า – Naadiyada qaar xittaa waxay u qabtaan warshad gaar ah, sida hanti maguurtada ama dugsiyada; laakiin waxaan kaliya ku dabooli doonaa saddexda qodobkan.
Mawduucyada Heer Xarrago leh – ในรูปแบบ 80 พรีเมี่ยมธีม WordPress, riix halkan si aad u aragto muuqaalka dhabta ah ee dhabta.
Booqasho: StudioPress.com Qiimaha: $ 129.95 / mawduuc กำลัง $ 499.95 / noloshiisii
Haddii aad tahay qof isticmaala WordPress ใช้เวลาในการโหลดเร็ว ๆ นี้เพื่อเปิดใช้งาน StudioPress Waxay cau kah tahay tan Qaab-dhismeedka Bilowga, iyo minimalist SEO- สร้างบล็อก WordPress สำหรับ WordPress สร้างโดย StudioPress.
StudioPress waxay bixisaa qiime jaban oo ku saleysan baahidaada Qaab-dhismeedka Heerka ee leh mawduuca ใน ayaa loo heli karaa lacag marmar ah oo ah $ 59.99 Mawduuca ugu sarreeya, oo ay ka กลาง yihiin Qaab-dhismeedka Heerka, kharashka $ 99 เหรียญ Haddii aad rabto inaad gasho dhammaan mawduuca, waxaad bixin kartaa $ 499.
Goobaha la diyaariyay waxaa bixiya ธีมงานศิลปะ.
ขี้ผึ้ง dheeri ah baro: Halkan waxaa ah dhowr waxyaabood oo kale oo fudud oo aad sameyn karto si aad u ต่างกันไปตาม WordPress WordPress
Labada nooc ee waxqabadka kale ee ay tahay inaad sidoo คะน้า eegto waa Muuqaal daruuri ah, Iyo WP Super khasnado ปลั๊กอินเปลวไฟคลาวด์จะถูกสร้างขึ้นและเป็น bixiso shirkadda CDN, Cloud Flare; ดาวน์โหลด WP Super Cache ay soo saareyso Donncha iyo Automattic, shirkadda sameysay oa ka shaqeysa WordPress มี.
Qalabka ‘cache plugin’ waa mid loo baah yahay ใน laga helo adduunka ee บล็อก adduunka xaayaah – taya-ka-ka-ya-ka-ka-ka-ya-ka-ya-ka-ka-ka-ya-ya.
Haddii balooggu ku leeyahay sawirro badan – ka fiirso kar darista EWWW Image Optimizer Waa hal-riix muuqaal muuqaal อู้วู้ดและเลอาอินูอาห์ u habeeyo faylasha sawirka maktabaddaada Waxay sidoo คะน้า leedahay muujinta isku-dhejinta muuqaalka otomatiga อาศรี loo yareeyo xajmiga sawirrada inta aeline gelineysid Adoo kaamilinaya sawirada, waxaad yareyn kartaa wakhtiyada bogga xamuulka isla markaana และ ku kasban karto waxqabadka deg degga ah ee goobta.
ขี้ผึ้ง dheeri ah baro: SEO 101 ee dadka wax qora ee ugu horreeya
Soo bandhigista tifaftiraha Gutenberg ee WordPress 5.0, dadka wax Qora ayaa hadda abuuri kara waxyaabo ay ka mid yihiin iyagoo adeegsanaya tifaftiraha ku saleysan bogga. Xaraash ahaan, WordPress wuxuu bixiyaa xirmo nuxur และเป็น sasa sadar, muuqaal, batoonka talaabo-ka-qaadista, gaaga-gaaban, iyo wixii la mid ah. Ku darista gelinta Gutenberg Block, waxaad kuhelaysaa waxyaabo badan oo kaqeybgal อา (tusaale ahaan – คำถามที่พบบ่อย, sadion, astaan ​​qoraa, ม้าหมุน, guji-to-tweets, บล็อก GIF, iwm) bartaada.
Quusin kara, Qormooyinka Ultimate, Iyo CoBlocks waa sedex Gutenberg บล็อก oo fudud oo bilaash และวัน iskuna inaad tijaabiso.
Tani waa sida caadiga ah sida newbie uu u bilowdo baloog อินเทอร์เน็ต ah: waxay wax ka qori doonaan shaqadooda shaqadooda Isniinta, hiwaayadaha Talaadada, filimada ay daawadeen Arbacadii, iyo aragtiyaha siyaasadeed intaca laguiroja Marka la soo koobo, dadkani waxay si sahal ah wax ugu qoraan mowduucyo fara Badan oo kala duwan oo aan diiradda saarin.
Haa, blogyadani waxay ku ururin lahaayeen degenaansho ka ah ah asxaabtooda iyo qoysaskooda; laakiin taasi waxay ku saabsan tahay.
Aad bay u adag tahay inaad haysato tiro akhristayaal ah oo daacad ah markaad wax iska qoraysid internetka sababtoo อา dadku ma ogaan doonaan inaad tahay dhaleeceyn ฟิล์ม Xayeysiiyayaashu waliba way ka caga jiidi doonaan inay ku xayeysiiyaan maxaa yeelay iyagu garan maayaan waxaad tahay คุณอยู่ที่บล็อก dhisto อา guuleysta, waxaad u baahan tahay inaad hesho.
สีดาลู doorto โพรงบล็อก saxda อา?
เรามี hesho waxyaabaha ku habboon ee ขี้ผึ้ง lagu qoro, waa kuwan qodobbada muhiimka ah ee tixgelinta la siinayo.
Haddii aad waligaa ku fikirtay "Waxaan jeclaan lahaa ใน qof uu ku biiro", taasi waa daqiiqad-a ฮ่า Haddii ay tahay mawduuc aad jeclaan lahayd ใน aad wax dheeraad ah ka ogaato, ka dibna waxay u badan tahay mowduuc ay dadku rabaan inay ขี้ผึ้ง ka ogaadaan.
Waa maxay aqoontaada gaarka อ่า? ข้าง ayaad u siin kartaa ขี้ผึ้ง yaryar mawduuc aan qof kale awoodin? Waxay xitaa noqon kartaa wareysi lala yeesho khabiir.
Tusaale: Gina baloogkiisa, Hirgelinta Dhibicda, wuxuu diiradda saarayaa caawinta hooyooyinka kor u qaadaya carruurta baahida gaarka อาเลห์.
2. ขี้ผึ้ง aad jeceshahay
Xasuuso inaad qori doonto, akhrineyso iyo ka hadlida mawduucaaga maalin kasta maalmaha soo socda. Haddii aanad xiiso u laheyn mawduucaaga mawduuca, ka dibna waxay noqon คาร์ตากลาง aad u adag in si joogto อา loo sii wado.
Inkasta oo muranku uu yahay mid weyn, haddana ma hubin mawduucaagu inuu noqon doono toddobaadka soo socda. Tusaale ahaan, haddii aad tahay mid aad u xiiso badan oo ku saabsan Vine iyo bilaabi บล็อก ah oo ku salaysan, marka markaa ka dhaco moodo waxaad noqon doontaa mid ka mid ah เนื้อหา Waik fikrad fiican inaad diirada saarto mowduuc guud oo badan, สีดา "jajabinta isdhaafsiga warbaahinta bulshada" อะ "barnaamijka sawirada ee dhagaxa". Habkaasi, haddii fadlan dhaco เป็นอารมณ์, บล็อก – คาวากัวะ wuxuu haysan karaa fiirin wixii ku habboon.
Blog-gaagu wuxuu u baahan yahay inuu ku jiro ซอก oo aad lacag ka sameyn karto.
Weydii naftaada haddii ay tahay mowduuc soo jiidan doona akhristayaasha isla markaana abuuri doona dakhli – ฮ่า noqoto กลาง xayeysiin อาอา ia iibin อา Haddii aad wax ku qoraysid การเขียนบล็อกหากไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าคุณควรจะทำอย่างไร? Barta ma soo gelisaa macaamiisha cusub? Haddii aad wax iska qoraysid uun sababta oo ah waxaad xiiseyneysaa mowduuca, ma jiraa hab aad ku kasban karto bartaada shaqsiyeed?
Waxaan isticmaalaa SpyFu, Qalabka xayeysiinta ee pay-per-gu ay riixdo, si loo qiyaaso faa iidada ugu fiican mararka qaar. Fikirkeyga tan ka dambeysa – haddii xayeysiiyayaashu ay kumanaan doolar ku bixinayaan Google Adwords, waa inay jiraan lacago lagu sameysan karo qodan Wau kuwan tusaalayaal aan soo helay:
Tusaale # 1: Tani waa tirooyinka xayeysiiska ee loogu talagalay soo saaraha muraayadaha cayaaraha (waxay u maleynayaan noocyada isboortiga sida Adidas ama New Balance laakiin yar) Shirkadan ayaa wax ka badan $ 100,000 bishiiba ku bixisay Adwords สีดา uu sheegay Spyfu.
Tusaale # 2: Tani waa xayeysiisyada xayeysiinta ee adeeg bixiyaha ไอที Waxaa jira qiyaaso badan oo 20 ah ciyaartoy คะน้า oo weyn Shirkadan, gaar ahaan, xayeysiisyada iibsaday ตามคำค้นหา 3,846 Google iyo ku qaatay $ 60,000 bishii.
ขี้ผึ้ง dheeri ah baro: Sida loo qoro ugu yaraan hal maaddo oo isbuucii si joogto ah
Cutubka 5. บล็อก Kobcinta Akhriskaaga
Runta murugada leh ee kuwa badan oo qorayaasha ขี้ผึ้ง ka qora ayaa ku qaadatay waqti badan si ay u dhisaan akhriskooda Helitaankooda 1,000 bog-eegis ee ugu horreeya waxay qaadan karaan bilooyin, iyo qaar ka กลาง ah baloogyada takhasuska leh waligood uma muuqdaan inay halkaas gaarayaan.
Dadku waxay ku hafanayaan cusboonaysiinta warbaahinta bulshada, quudinta wararka, emayllada, iyo noocyo kala duwan oo xayeysiis อา. Way sii adkaaneysaa ใน dadka laga dhigo akhriska waxa ku jira ถ้าไม่มี kotaba, nojotee, weli wa เดียวกัน sameyn kartaa wax wanaagsan haddii aad ogtahay cidda dhagaystayaashaada fiican ay tahay iyo waxay raadinayaan Ka fikir farqiga umadaada, noocee ayaa ka dhiman iyo sida aad qiimo dheeri ah ugu soo kordhin karto dhagaystayaashaada.
Wau kuwan waxyaabo kaa caawin kara cilmi-baaristaada:
Adeegso aaladaha tusmada sida Ka jawaab dadweynaha ใน lagu raadiyo su’aalaha caanka ah ee dadku ku weydiiyaan Google.
คุณ adeegso tiro aragtiyo ah gudaha YouTube และคุณ hesho mowduucyo dadku xiiseeyaan.
คุณ adeegso aaladda baarista ereyga furaha si aad u go’aamiso mawduucyada gaarka ah ee dadku au dadku au ku raadinayaan gudahaaga hoygaaga อา Waxaad soo saari kartaa waxa ku saleysan ereyadaas ereyadaas.
Waa inaad มี iyo jeer la wadaagtaa qoraalladaada, badar marrar Haddii laguugu casuumo inaad ku biirto koox koox ‘Pinterest board’ oo u dhigma sida aad u fiican tahay, isqoro oo wadaag oo faallo ka bixi si joogto ah. Haddii aad ku biirto liistada kuwa maanka doorin kara, udhaca waa inay si joogto ah u wadaagi doonaan waxyaabaha midba midka kale ka kooban – toddobaadle ama maalinle Tani waxay ka caawin doontaa kobcinta akhriskaaga iyo ka qeybgalkaaga.
Si joogto ah u raadi qabiilkaaga – abaalmarin xubnaha คะน้า ee ku jira oo xiriir la yeelo.
Ka caawi dhinacyada xafladaha Twitter Faallo ka bixi qoraallada xubnaha kale La wadaag qodobbada wargeysyadaada Soo uruuri oo abaalmari boggaga internetka อี๊ด jeceshahay adigoo soo bandhigaya mid toddobaad kastaa ama bil kasta ah.
Weydii sida aad qof kale uga caawin karto boostada martida ama martida boosaska dhibcaha Iibso alaabta ay isticmaalaan, isticmaalaan xulafadooda la xariira, waxay kor u qaadaan xiriirkooda warbaahinta bulbaada markaad ku dhejineyso. สีดา fursado lagu qoro booggeylayaashu waxay so baxaan, kuwan bloggaalku waxay xasuustaan ​​caawimadaada waxayna kugu martiqaadayaan inaad kaqaybqaadato.
Waan kacsanahay markii aan helo maqaal cinwaankiisu yahay cinwaan aad ayaan ya ayaan ugu faraxsanahay oo keliya ใน aan ka helo qoraal kooban, Sadarro kooban, cinwaanno ama rasaas Taas ayaa iga kaxeysa.
Marka laga eego waxa aor ku ko soo qaatay, baloogguagu kuma qasbi karo akhristayaasha ขี้ผึ้ง lala soo baxo iyo badhamada Bedelkeeda, u soo bandhig jawaabta si xirfad leh akhristayaashaada. Baro caqabadaha waqtiga akhristayaashaada oo fahanto waxa ku kallifaya inay kusii joogaan boggaaga.
คุณ kay qaybso waxyaabaha ku jira bartaada qaybo ama baaragaraafyo Darbiga qoraalka ayaa u ekaan kara cabsi gelin iyo aqrinta akhristayaasha.
Iska ilaali inaad isticmaasho farriimaha xiisaha leh ตัวอักษร Ku dheji badbaado leh sida Arial, จอร์เจีย, ไทม์ส, iwm.
Adeegso Ingiriis fudud oo ku qor jumlado gaagaaban Ujeedada maqaalkaaga u akhri akhriska ardayda fasalka sideedaad.
4. Faallooyinka บล็อก
Marka hore, faallooyinka boggaga internetka ayaa ah sida ugu macquulsan ee loo tixraaci karo habka lah dhisayo taraafikada – badanaa sababta oa ah dadku waxay nuugaanynahayahayahahahayahahahayahahahayada layahahayahahahayahhayah คุณอยู่ที่นี่ไม่มีข้อความบล็อกของบล็อกนี้ waa hab tayo leh oo lagu dhisayo taraafikada kaas oo waliba xor u ah – taas kama doodi karto taas!
Had iyo jeer qor faallo tayo leh Haddii aadan haysan wax macno leo อูดูดาคู kart darto, ฮ่า uga tagin faallooyin ("Waad ku mahadsan tahay dhejintii wanaagsan") ee faallooyinka … waa wax aan faa’iido lahayn)
Kaliya xariir iskuxirka meeshii ku habboon ในตอนนี้, สแปมเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณ isugu dayaan inay u muuqato; dib ayey kuguula noqon doontaa
ใน kasta oo sharci kale (maaha xeerka dahabiga ah, laga yaabee), ได้มีการติดแท็กไปยัง xiriir, URL นี้เป็น URL ของเรา Taabadalkeed, kuxiir boostada ay khusayso ee kuu gaarka อา taas oo qiimaha ugu kordhisa boostada asalka อา iyo wadahadalka Isukeenida ayaa fure u ah halkaan.
Dood-wadaagyada iyo Q&A-yada ayaa ah meelo fiican oo lagu helo kursi ka hor dhageystayaashaada quseysa, xiiseynaya Tilmaanta ayaa ah ใน la kormeero wada hadalada joogtada ah ee ka socda wadankaaga si aad ugu hakin karto markaad haysato ขี้ผึ้ง caawimaad leh inaad dhahdo (iyo มายา, Maahan ใน eeee aa ontoonto Waxaad u baahan doontaa akhristaha wanaagsan, sida Feedly, ถ้าคุณชอบ shaqadan และ qabatid.
Adoo aan helin helitaan sax ah ama fursado ku filan oo ku saabsan aragtida อา?
Abuur waxyaabo gaar ah oo caadifad la leh วาดาดาบัด gaar ah oo kulul Tusaale ahaan, haddii qof weydiiyo สีดาขี้ผึ้ง loogu sameeyo lambarka. htaccess, waxaad qori kartaa waxbarista oad ugu dhajin kartaa bartaada – ka dibna, qaybta Qaybta&Ae goobta, uga jawaab jawaabihii shaashadda, adigoo ku xiraya bartaada หากคุณเป็นคนหนึ่ง Arinta jirta ayaa ah ใน haddii hal qof weydiiyo su’aasha, kuwa kale ay leeyihiin isla sua aaaasas – oo jawaabtaada golaha iyo xiriirintaadu aii sia nuga doo doo sao nugo.
Marka la eego qalabyada S&iyo qalabka loo adeegsado, waan ku talinayaa
Quora, Klout, iyo Yahoo! Jawaabaha – kuwanu waa seddex ka กลาง ah qaababyada guud ee ugu fiican ee Q&
ขี้ผึ้ง dheeri ah baro: Raadi habab intaa ka badan oo lagu kasbado bloggaaga และ akhriyaa Kevin Muldoon จาก Daraasad kiis oo ku saabsan iibinta BloggingTips.com และ $ 60,000.
ใน kasta oo aalado bilaash ah oo waxtar เลห์ iyo adeegyo shabakad ay intarnetka ka jiraan, haddana dhibaatadu waxay ka dhexaysaa dhammaan jaangooyooyin คะน้าอะ / iyo qalab waqtigiisu.
Sida hadiyad qayb ka ah akhrinta hagaha ilaa halkan, waxaan ku siin doonaa liiska qalabka bilaashka ah ee aan aan mar walba isticmaalno WHSR Nasiib wacan, waxaanan rajeynayaa inaad ku guulaysato safarkaaga บล็อก.
Barnaamijka "แอพ Hemingway" – Ku qor gaaban oo geesinimo leh qalabkan.
แผนภูมิ Pik ilaa – Aalad sahlan oo abuur abuur macluumaad ah.
Favicon.io – matav favicon ugu fiican, weligiis.
Sawirro Sawirro iyo Sawiro bilaash อา
Isticmaalaha Calaamadaha – ไอคอน Diiwaanka bilaashka อา
Faylasha Morgule – ใน ka badan 350,000 sawirro ah oo loo adeegsado ganacsiga.
Kaydinta Suuqa – Buugga tusaha sawirrada oo leh sawirro bilaash อาอู qurux badan oo lagu daray toddobaadle.
ไอคอน WHSR ไปยังลาอาอา – Astaamo bilaash อาโอโลโลคุทาลากาเลย์ naqshadeeyaha gudaha-guriga.
Buugga Xaqiiqada Adduunka – Lama afduubin – macluumaadka adduunku si toos ayey uga helaan CIA-da.
Suuq-geynta Shirkadda – Warbixinno suuq geyn bilaash อา.
ฟีดการค้า – joornaalada bilaashka ah, waraaqaha cad, iyo daraasadaha kiisaska.
Qoraal sifeyn ah – Fikradaha iyo dardar galinta และ looga gudbo qorista buugaagta
Barta Internetka ee Bing – Qalabka baarista e barta อินเทอร์เน็ตและ Bing.
ผู้ดูแลเว็บ – Google – Qalabka baarista ee bilaashka และ ee Google.
Sida Explorer – Hubi cabirrada bulsho ee waxyaabahaaga (ama tartamayaasha) แว็กซ์ไปหา ka kooban ตา.
Tweet Deck – Ku xer koontooyin badan oo พูดเบาและรวดเร็วแดชบอร์ด.
Google Analytics – Xaashiyaha shabakadda oo bilaash อา.
Matomo – Google Analytics เพื่อ Google.
WP Statistics – เวิร์ดเพรสธีมบาร์เบราว์เซอร์ WordPress.
บล็อก Su’aalaha Inta Badan La Isweydiiyo
Qiimaha lagu qiyaasay ใน lagu bilaabo baloog ay kujirto magac โดเมน iyo marti galinta websaydhada ayaa ka hooseeya $ 100 sanadkii (ใน kayar $ 10 bishii) Kharashkani wuxuu ku saleysan yahay bog iskiis u habeysan (ยินดีต้อนรับสู่ WordPress) Jebinta qiimaha waxay noqon doontaa: $ 15 sanadkii sanadkasta oo magac โดเมน ah .com iyo qiyaastii $ 60 sanadkii lacagtii martigalinta webka.
2. Sideya ayaa bloggers lacag loo siiyaa?
Si aad u hesho sawir wanaagsan oo ah sida loo helo lacagta ขี้ผึ้ง qorayaasha, waxaan u kala saahaya kaahaadaha bahaahaaha bahaahaha shaha shaha shaha shaha ka sha sha ka sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha shaa shaaha shaaha shaahaa.
3. Sidee loo bilaaba baloog bilaash อา?
Waxaa jira qalab badan oad aa maanta ka bilaabi karto baloog bilaash อา, สีน้ำตาล waxaa kira jira WordPress.com, Tumblr ama Blogger. หากคุณเป็นคนเขียนบล็อก bilaash ah, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad iska qorto oo aad bilaabi kartaa inaad daabacdo waxaaga.
4. Maxuu yahay qabashada ka dambeysa barta อินเทอร์เน็ตอีอี bilaashka อา?
ขี้ผึ้งมะจิรารันลาคอะลาอะแด่น adduunkeena ka jira Waxa jira dhowr faa’iido darro oo leh madal qorista blogka oo bilaash อา:
– Magaca boggaaga balooggaagu wuxuu u muuqdaa inuu yahay subdomain sida“ myblogname.wordpress.com” ama“ myblogname.tumblr.com”
– Waxaa jira shaqooyin xaddidan, ปลั๊กอิน iyo xulasho mawduuc oo aad ku samayn karto bartaada
Waxaan si xoogan kuugula talinayaa inaad bilowno baloogaga adoo adeegsanaya WordPress. (sida waxa aan ku sheegay buugan). Ka sokow xakameynta xaddidaadda barta internetka bilaashka ah, kobcinta suurtagalka ah ee บล็อกกาวากัวะ wa aan xad lahayn.
Magaca magaca bartaada ayaa u muuqda โดเมนย่อย sida“ myblogname.wordpress.com””“ myblogname.tumblr.com”
Waxaa jira adeegyo xaddidan, ปลั๊กอิน iyo xulasho mawduuc oo aad ku samayn karto bartaada
สกรีนเซฟเวอร์หน้าแรกของ Nidaamka Xayeysiiska WordPress และ WordPress
Weligaa miyaad dooneysay inaad bilowdo baloog kuu gaar ah? Ama, miyaad horay in leedahay